Duufaantii Otto oo ku dhufatay Bartamaha Ameerika | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Otto waxay ku dhufatay Bartamaha Ameerika
Sawir - Shaashadda shaashadda dhulka.nullschool.net
Xilligii duufaanta Atlantic wali ma dhamaan. Isaga Duufaantii Otto, oo ku taal Bartamaha Ameerika, waxay qasab ka dhigtay daad-gureynta in ka badan 10.000 oo qof, waxayna sababtay dhimashada saddex ka mid ah Panama.
Hadda waxay ku sii dhowaaneysaa Costa Rica, oo leh dabaylo joogto ah oo gaaraya 120km / saacaddii.
1 Sameynta Duufaantii Otto
Sameynta Duufaantii Otto
Sawir - NOAA, Nofeembar 22, 2016.
Otto waxaa la aasaasay Isniintii la soo dhaafay, Noofambar 21, qiyaastii 530 km bariga Nicaragua. Si kastaba ha noqotee, si dhakhso leh ayey u xoogaysatay oo Talaadadii 22 waxay noqotay duufaan Nooca 1 ah, oo leh dabaylo xawaarekoodu aad u sarreeyo 120km / h iyo xawaare dhan 4km / saacaddii. Maalintaas, laga soo bilaabo Costa Rica ilaa Panama, duufaanta si dhow ayaa loo daawaday, magaalooyinkii Panama ee Colón iyo Nargana Island waxaa la siiyay digniin ku saabsan duufaanta kulaylaha.
Bishii Nofeembar 23, way daciiftay oo waxay noqotay duufaanno kulayle ah mar kale, dabaylo ka badan 100 km / saacaddii. Waqtigaas, waxay ku taallay meel 300km u jirta Costa Rica iyo 375km oo u jirta Bluefields, oo ku taal Nicaragua. Iyadoo ay taasi jirto, waxay masuuliyiintu ugu baaqeen shacabka inaysan hoos u dhigin ilaaladooda: Otto wuu is adkeyn karaa markale kahor inta uusan garaacin Costa Rica.
Wadada suuragalka ah ee Duufaanta Otto. Sawir - Wunderground.com
Taasina waa tii dhacday. Otto Qeybta 1 duufaan mar kale leh dabaylo ka badan 120km / saacaddii. Sababo amni awgood, digniino ka hortag ah ayaa la soo saaray waxaana qorshooyinka daad gureynta laga hirgeliyay magaalooyinka xeebta ku yaal
Tani waa xaalad sii murgsan iyada oo aan khibrad badan u lahayn duufaannada, iyo iyada oo aan la helin kaabayaal ku filan oo looga hortago dabaylaha xoogga leh. Sidaas darteed, Maamulka Costa Rica waxay faarujiyeen dhammaan dadkii deganaa magaalooyinka nugul, xitaa ka soo horjeedka rabitaanka in badan oo ka mid ah, ka hor inta aysan Duufaanta Otto soo gaarin dalka.
Berri Jimcaha iyo dhammaadka toddobaad, waxaa lafilayaa inay daciifto.
Waxaan kuu daayeynaa muuqaal laga duubay Panama kadib marinkii Otto:
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Otto waxay ku dhufatay Bartamaha Ameerika
7,2 dhulgariir ayaa ruxay Nicaragua iyaga oo sugaya imaatinka Duufaanta Otto
Inta badan Isbaanishka Mareykanka waxay ka walaacsan yihiin isbedelka cimilada